Photoshop CC Video Tutorial: Wajiyada Lakabka iyo kala duwanaanshaha | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiijinta sawir-gacmeedkeenna ayaa si toos ah ugu tiirsan is-dhexgalka walxaha ka kooban halabuurkeenna. Gaar ahaan marka la dhisayo sawirro la jaray oo macquul ah, fikradani waa muhiim. Tan awgeed, Photoshop waxay na siisaa dhowr qalab sida qaababka isku-darka lakabyada, maaskaro lakabka ah, gooladaha nalka ka soo horjeedda, iyo cabbiraadaha kala duwanaanta Barashada si loo barto dhammaan noocyada hagaajinta waxay naga caawin doontaa inaan abuurno sawirro muuqaal ah oo isku xiran.
Si aad ugu shaqeyso farsamadan, waxaan kuu keenay tan fudud Photoshop CC video Tutorial. Dhexdeeda, waxaan ku sharixi doonaa sida loo sameeyo boodhadh xayeysiis ah iyadoo la isticmaalayo inta badan maaskaro lakab ah. Waxaan ka shaqeyn doonnaa isdhexgalka hawada (gelinta walxaha biyaha hoostooda), chromatic iyo light iyadoo loo marayo saameynta kala duwanaanshaha (mideynta halabuurka) Tallaabooyinka aasaasiga ah ee lagu fulinayo mashruuca waa:
Waxaan abuureynaa mashruuc cusub oo leh cabirrada 544 × 914 pixels, oo leh 72 pixels halkii inji, midabka RGB, 8 jajab iyo asal hufan.
Waxaan soo dajineynaa muuqaalka badda oo waxaan ku dhalan rogeynaa aaladda isbeddel (Ctrl + T), si loo abuuro qoto dheer.
Waxaan jareynaa dabeecadda weyn iyadoo la adeegsanayo qalabka sixir wand waxaana dhigeynaa lakabka badda.
Waxaan riixnaa Ctrl oo guji lakabka dabeecadda si loo xusho shaxdiisa.
Waxaan aadeynaa lakabka "Badda" oo aan abuureynaa a maaskaro lakabka. Marka xigta waxaan laba jibaareynaa maaskaro lakabkeena ah oo guji rogaal celinta.
Waxaan u adeegsanaa qalabka burushka madow a 100% mugdi iyo ballac la mid ah lakabka badda si kor loogu qaado dusha sare ee dabeecadeena.
Waxaan soo dhoofsaneynaa sawirka badda hoosteeda waxaana dhigeynaa lakabyada intiisa kale. Waxaan u beddeleynaa illaa aan ka daboolno qaybta hoose ee halabuurka.
Waxaan ku abuureynaa maaskaro lakab ah lakabka astaamaha, waxaan dooranay burush madow oo leh 35% madadaalo waxaanan sii wadaynaa inaanu siinno halyeeyada summad badeed.
Waxaan nuqul ka sameysaneynaa lakabka bada oo aan codsaneynaa saameynta Gaussian blur oo leh 5 pixel dejin.
Waxaan ku buuxineynaa maaskaro lakabka nuqulkan madow adigoo riixaya Wareejinta + F5. Kadib, waxaan dooranay burush yar oo cad si aan uga gudubno cidhifka kala geeya badda iyo dusha.
Waxaan soo dajineynaa muuqaalka cirka. Waxaan ka jarnay aaggii daruuraha oo waxaan ku badalnay sawirka Ctrl + T.
Waxaan mar kale riixnaa Ctrl oo guji lakabka dabeecadda si loo xusho shaxdiisa.
Waxaan ku abuureynaa maaskaro lakabka lakabka cirka oo laba jeer guji dusha ka dibna guji "maalgashi".
Waxaan doorannaa buraash cad waxaanan sii wadnaa inaan tirtirno halo hareeraha astaamaha.
Waxaan soo dajineynaa, bedeleynaa oo aan dhigeynaa sawirka "dab-dabka". Waxaan abuureynaa maaskaro lakab ah waxaanna ku xulannaa burush a 35% mugdi si loogu mideeyo sawirkan badda hoosteeda.
Waxaan dooranaynaa dhammaan lakabyada, riix batoonka midig oo guji "isku dar lakabyada".
Aan aadno Kala duwanaansho (Sawir> Isbadal> Kala duwanaansho) oo waxaan ku dabaqnaa codadka la doonayo ee muuqaalka, dhexda iyo qaybaha muuqaalka.
Oo waxaan horey u abuurnay boodhadhkeena! Miyaad ku dhiirrataa inaad sameyso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Photoshop CC Video Tutorial: Isdhaxgalka Saamaynta, Wajiyadda Lakabka, iyo Kaladuwanaanta
Ruben Valle dijo
Xuduudda cad ee weli ku hareeraysan dabeecadda, miyaanay ahayn wax nadiif ah, ka waxtar badan isla markaana isla markaa u adeegi doonta in wax yar ka sii qoto dheer tahay xulashooyinka ay bixiyaan waji duubku, isticmaal «nadiifinta - Xadka Maska», gudaha maaskaro?
Waa u fiirsasho aniga uun iska ah :) Hab-qabsi iyo cashar wanaagsan.!
Ku jawaab Rubén Valle